Shina tsy misy tariby vokarin'ny orinasa China Feihu
Feihu wrench impact wrench dia fitaovana elektrika ampiasaina amin'ny famotsorana na fanamafisana ny voanjo lug, bolt lehibe ary fatotra mihidy na harafesina Manome torolàlana mihodina be dia be izay tsy azon'ny mpamily herinaratra mahazatra. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny indostria maro, toy ny fanamboarana fiara, fikolokoloana fitaovana mavesatra, fivorian'ny vokatra, tetik'asa fananganana lehibe, ary ohatra hafa ilana famoahana tora-by lehibe.
Feihu wrench impact cord dia miasa amin'ny alàlan'ny mekanika famonoana anatiny izay mamindra ny angovo kinetika ao amin'ny vatan'ny output. Ity manaraka ity dia ny antsipiriany momba azy:
Loharanon-kery: bateria lithium
Ora famandrihana: 2 ora
Hafainganana: 0-2000 RPM
Torolàlana Max: 320 Nm / 2830 in-lbs
Chuck Size: 14-28 mm
Fonosana: boaty plastika
1.Compact sy mahery: miaraka amina motera matanjaka be, ity valizy mihatra 21V ity dia manome tselatra max 320 Nm sy max hafainganana 2000 RPM, ahafahanao manenjana na mamaha ireo voanjo sy bolts maro samihafa.
2.Fandefasana miovaova tsy misy farany: Miaraka amin'ny tsindry hafainganam-pandeha miovaova dia azonao atao ny mifehy mora foana ny hafainganan'ilay valizy. Arakaraky ny itiavanao ny fikafika no avo kokoa ny hafainganan'ny vokatr'izany. Vantany vao avoaka ny tsimoka, hijanona eo noho eo ilay fitaovana, mahatonga azy io ho azo antoka kokoa mandritra ny fampiasana.
3.Power famantarana sy jiro LED: 21V 2000mAh bateria Li-ion azo averina ampiasaina dia mamela ny fitaovana hiasa ela kokoa. Mampiseho ny habetsaky ny herinaratra ampiasaina ny fampisehoana herinaratra ary mampahatsiahy anao handoa vola amin'ny fotoana. Miaraka amin'ny hazavana LED dia afaka miasa ao anaty aizina mihitsy ianao ary mahita mazava tsara ny faritra iasanao.
4. Heavy Duty sy Ergonomic Design: Miaraka amin'ny fitaovana avo lenta amin'ny lohan'ny vy, manatsara be ny ain'ny serivisy an'ity fitaovana ity. Ny fehin-kodiarana vita amin'ny fehin-kibo miaraka amina endrika ergonomika dia manome fiononana faran'izay betsaka ary tsy dia hovitrovitra.
Feihu wrench impact wrench, safidy tsara ho anao, ataovy mora sy mety ny asanao.
Previous: Basy rano Lithium
Manaraka: Gunting tsy misy tariby
Rindrambaiko misy vokany tsy misy tariby
Wrench Impact Electric Cordless
Brushless vokadroatra tsy misy tariby
Fiadiana mahery vaika dia manimba
Wrench Impact Cordless Industrial